Soomaaliya oo deeq tallaalka COVID-19 kala wareegtay Mareykanka - Bulsho News
Faizabad oo noqotay magaaladii 9aad oo ugacan gasha Talibanka
Ra’iisul Wasaare Rooble oo u amba baxay Masar
Soomaaliya oo deeq tallaalka COVID-19 kala wareegtay Mareykanka
Dowlada Maraykanka ayaa keentay dalka Soomaaliya talaalka Covid19 oo gaaraya 302,400 kaasi oo ah nooca Johnson & Johnson.
Tallaalkan waxaa Soomaliya ugu deeqday Dowladda Mareykanka, iyada oo soo marisay xarunta COVAX (CEPI, Gavi, UNICEF, WHO), ujeedaduna tahay in dalka Soomaaliya laga saacido ka hortagga Caabuqa COVID-19.
Imaatinka qaybtaan koowaad ee tallaalka Johnson & Johnson ee COVID-19 ayaa ku soo aaday iyadoo lagu guda jiro waqti xasaasi ah oo uu caabuqa COVID-19 soo laabtay markii 3aad. Sida kaliya ee loo joojin karo faafitaanka caabuqani ay tahay in la tallaalo dadweynaha.
Wasaaraddda Caafimaadka ayaa uga mahadcelisay Dowladda Mareykanka deeqdan, iyadoo Wasaaradda ay ugu baaqday dhammaan Shacabka Soomaaliyeed in ay qaataan Tallaalka.
Talaalka Johnson & Johnson ayaa ah mid qofka halmar qaadanayo, halka talaalada kale loo baahan yahay qof walba in la talaalo laba goor.
by 34 mins ago 34 mins ago
Al-Shabaab attack in central Somalia kills senior military...
NZ says Australia’s new nuclear submarines must stay...
Xabsigii aan mar maxbuuska ka ahaa ayaan hadda...
Robert Lewandowski Oo Ka Hadlay Wararka La Xidhiidhinaya...
Axmed Madoobe Oo La Kulmay Haweenka Soomaaliyeed
Midowga Musharixiinta oo War kasoo saaray Howlaha Turxaanbixinta...
Brazil’s health minister tests positive for COVID-19 in...
Madaxweynaha Jubaland oo Muqdisho kula kulmay Safiirka Ethiopia...
RW Rooble Oo Soo Dhoweeyey Shaacinta Liiska Musharaxiinta...
Qoor Qoor oo saddex qodob kala hadlay ergeyga...
Dal maxaabiista ka mamnuucay inay yeeshaan xiriir jaceyl...